Nirongatra ny valanaretina, ny faran’ny herinandro: vehivavy iray matin’ny Covid-19, 153 ireo tranga vaovao | NewsMada
Nirongatra ny valanaretina, ny faran’ny herinandro: vehivavy iray matin’ny Covid-19, 153 ireo tranga vaovao
Mbola mampanahy noho ny firongatry ny valanaretina. Vehivavy iray indray matin’ny Covid-10 ny faran’ny herinandro teo. Tafakatra hatrany amin’ny 153 ireo tranga vaovao. Na izany aza, nihamaro koa ireo sitrana.
Niampy iray indray ny maty. Vehivavy iray, 54 taona, taizan’aretina diabeta sy manana tosidra avo ny namoy ny ainy noho ny Covid-19, afakomaly tany Toamasina. Tafakatra 14 izany izao ireo lavon’ity valanaretina ity, hatramin’izao, ka 10 ny avy any Atsinanana raha efatra kosa ny avy eto Antananarivo. Samy efa taizan’aretina ny ankamaroan’izy ireo.
Etsy andaniny, miisa 60 ireo tranga vaovao araka ny tatitry ny CCO ny asabotsy teo. Nitombo be, tafakatra 93 izany raha ny antontanisa, omaly. Izany hoe, miisa 153 izany tao anatin’ny telo andro teo.
115 ireo nifindran’ny Covid-19 eto Antananarivo
Tsy mbola nisy tahaka izao ny tranga vaovao. Anisan’ny tena manaitra koa ny fahamaroan’ireo nifindran’ny valanaretina ho an’ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Miisa 115 izany amin’ireo 153 tao anatin’ny andro vitsy ireo. Manodidina ny 40 hatramin’ny 60 eo hatrany ireo tratran’ny Covid-19 tao anatin’ny herinandro maromaro, saingy izao niakatra be izao. Tonga hatrany amin’ny 90 mahery, araka io antontanisa io.
Lasa laharana faharoa eo amin’ny fahamaroan’ny nifindran’ny Coronavirus ny any Toamasina tato ho ato. Miisa roa ny asabotsy teo ary 21 kosa ny omaly. Manaraka akaiky azy eo ny any Fenoarivo Atsinanana, tranga 12. Mbola niverenany koa anefa ny any Fianarantsoa, nahitana tranga iray.
Tandrevaka sy goragora amin’ny fepetra
Midika ireo rehetra ireo fa misy ny tandarevaka sy tsy fanarahana fepetra na koa goragora. Manaporofo izany ny gaboraraka eny ambony fiara fitaterana amin’ny fametrahana olona eo amin’ny « seza volamena ». Ny fahitana olona tsy manao aron-tava na manao ihany fa tsy manarona ny tavany. Tsy heno na tsy misy intsony ny fanasaziana ireo tsy manaraka ny fepetra. Miraviravy tanana ny mpitandro filaminana? Miditra amin’ny andro ririnina rahateo koa isika ka mampahazo aina ny covid-19 izany.
Na izany aza, nihamaro koa ireo sitrana tao anatin’ny andro vitsy. Miisa 120 izany ny asabotsy teo ary sambany izany hatramin’ny volana marsa no ho mankaty. Miisa 37 izany ny omaly.
Miisa 157 ireo sitrana tao anatin’ny telo andro
Izany hoe, 157 ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. Misongadina amin’izany ireo 108 sitrana tany Toamasina.
Tafakatra 1 596 izany izao ny tratran’ny Covid-19 eto amintsika. Mbola 995 anefa ireo tsaboina sy arahi-maso ny fahasalamany. Miisa 655 ireo efa nalefa nody noho ny fahasitranany. Niampy roa ka lasa sivy ireo marary mafy « forme grave » ary 18 119 ireo fitiliana vita, hatreto.